Gudoomiyaha Golaha shacabka oo meel mariyay xeerka Maamulka Bangiga Dhexe ee Soomaaliya – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaGudoomiyaha Golaha shacabka oo meel mariyay xeerka Maamulka Bangiga Dhexe ee Soomaaliya
Gudoomiyaha Golaha shacabka oo meel mariyay xeerka Maamulka Bangiga Dhexe ee Soomaaliya
Hiiraan Xog, Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa meel mariyay xeerka Maamulka Bangiga Dhexe oo wax ka bedel lagu sameeyay.
158-Xildhibaan ayaa ogolaatay, halka 17-xildhibaana ay diideen,waxaana sidaasi ansax ku noqday xeerka wax ka bedelka Maamulka Bangiga Dhexe.
Sidoo kale,Xildhibaanada Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulankooda maanta ku ansixiyay wax ka bedel lagu sameeyay hindise sharciyeedka Hanti Dhowrka guud ee Qaranka.
Xildhibaanada Golaha Shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa dardar gelinaya ansixinta sharciyada muhiimka ah ee horyaala,taasi oo cadeyn u ah howlaha ay u hayaan Shacabka Soomaaliyeed.
Xildhibaanada golaha Shacabka oo ansixiyay wax ka bedel lagu sameeyay Hindise Sharciyeedka Hanti Dhowrka guud ee Qaranka